Warta-nabadda oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Warta-nabadda oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka
Warta-nabadda oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka
Habeenkii 15-aad wareega labaad tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka ee uu maamulka gobolka Benaadir taabagelinayo, waxaa ku tartamay degmooyinka Baladweyne oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Warta-nabadda oo gobolka Benaadir ah.
Labada degmo waxaa la weydiiyey qeybta hore afar su’aal mid walba oo wadarta guud ka dhigeysa siddeed su’aal, kaddib ayaa la soo gudbiyey warbixinnaddii Taariikhda labada degmo ka hadleysay.
Degmada Baladweyne oo ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaa la weydiiyey toddoba su’aal waxa ay si sax ah uga jawaabbeen hal su’aal lix waa ay iska qaldeen, sidaas ayeey ku heleen laba dhibcood ( 2 dhibcood).
Degmada Warta-nabadda oo ka tirsan gobolka Benaadir, waxaa iyaduna la weydiiyey toddoba su’aal waxa ay ka jawaabbeen laba su’aal shan waa ay qaldeen, hal su’aal ayeey si ka faa’ideysi ah uga jawaabbeen, waxa ayna heleen Lix dhibcood ( 6 dhibcood), wareegga saddexaad ee tartanka waxaa u gudubtay degmada Warta-nabadda.
Habeen dambe waxaa ku tartami doona wareegga saddexaad degmooyinka Shangaani oo ka tirsan gobolka Benaadir iyo Gaalkacyo oo ka tirsan gobolka Mudug.
Previous articleMadaxweynaha Hirshabeelle ayaa maamul cusub u magacaabay gobolka Hiiraan
Next articleWasaaradda Arrimaha Dibada oo Waraaqaha aqoonsiga ka gudoontay Danjiraha Cusub ee Jaamacadda Carabta